allsanaag.com - Odayaasha Hawiye oo waraysi bixiyey
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3206	Days	18	Hours	46	Minutes	15	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Odayaasha Hawiye oo waraysi bixiyey
Written by khalid	Kismaayo waxa qasaya Daaroodka ku nool Kenya iyo Itoobiya iyo kuwa ka yimid Xeebaha Fog (Puntland).
Gudoomiyaha Odeyaasha Beelaha Hawiye Maxamed Xasan Xaad oo ka hadlay arimaha Kismaayo iyo Maamul u sameyntooda ayaa sheegay in Magaalada Kismaayo ay iyagu u yaqaanaan meel aan cid gooni ah sheegan karin oo ka dhaxeeysa Soomaali oo dhan. Waxuu sheegay in aysan faraxgelineynin Odeyaasha Beesha Hawiye in magaalada Kismaayo ay boobto beel gooni ah.
Xasan Xaad sheegay in aysan raali ka noqoneynin dhulboob iyo xooga Kismaayo lagu qabsanayo iyo guud ahaan gobalada Jubboyinka.
Waxuu intaasi ku daray in meelaha laga dhibaayo Kismaayo ay kamid yihiin , Kililka Shanaad, Somali loo yaqaano Somali sujuu ee Kenya ,oo ula jeedo NFD iyo dad ka yimid xeebaha fog oo ula jeedo puntland.
Hadalka Xaad waxaad ka dheehan kartaan damaca dhulboobka ku saleysan ee wali ka guuxaya shaqsiyaadka hogaanka u haya Beesha Hawiye. Dawaca meeshaay macal ugu barataay macluul ugu dhimataa. Nin Baadil iyo dhulboob ku naajaxay 22 -sano waay adagtahay in laga dhaadhiciyo waxaaga ku ekoow iyo nidaam iyo dowladnimo raac.
Waana dhibka ugu weyn ee haysta dadka haysta muqdisho, lagamana sugayo in ay ka ka waantoobaan dhaqankaasi xitaa hadii Soomaali inteeda kale isku tashato. Maxaa yeelay dad aaminsan in taariikhdaba ka soo bilaabatay 1991, meelahii ay xooga ku qabsadeena aaminsan in ay iyagu leeyihiin waay adag tahay in cadaalada la fahansiiyo oo nidaam loo sameeyo.
Waxay ubaahan Yihiin dadka Muqdisho haysta in la fahan siiyo in ay gartaan waxa ay iyagu lee yihiin iyo waxa dadka kale leeyahay, iskana soo celiyaan wax kasta oo ay baadil ku heystaan dhul ama hanti dad weyne, degmo ama gobal aysan laheyn intuba.